Ogaden News Agency (ONA) – Socdaalka Cabdi Iley Waa Qayb ka Mid ah Xaaladda ka Jirta Itobiya – Noora Afgaab
Socdaalka Cabdi Iley Waa Qayb ka Mid ah Xaaladda ka Jirta Itobiya – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ March 18, 2015
Jawaabta aan ka helnay wariyaheena Noora Afgaab ayaa ahayd, Cabdi Iley wuxuu qayb ka yahay looltanka Qoor Iska Jarka ah (Cut Throat) ee ka socda Adis Ababa. Looltankan ayaa wuxuu u dhexeeyaa siyaasiyiinta badankood oo doonaya inay Itobiya ka baxado marxaladii TPLF/1991 oy u gudubto marxalad la jaanqaadi karta nolosha casriga ah iyo qarnigan 21aad iyo Jananadii TPLF oo aaminsan inay iyagu xoreysteen Itobiya sidaa daraadeed aanay diyaar u ahayn inay xukunka kaga tagaan waxay ku tilmaamaan warqad sanduuq lagu riday.
Hadaba Cabdi iley waa askari ka mid ah askartaa Jananada, wuxuuna u arka maslaxadiisa inay ku jirto inuu mugdiga wax kula qaybsado nimankan Jenanada ah.
Siyaasiyiin badan oon arimahaa wax ka weydiiyay oo ka kooban qawmiyado kala duwan ayaa u arka in kooxda Jananada u badan ay Itobiya ku wadaan meel halis ah, waxayna isku raaceen in kooxdan daacadnimadooda (allegiance) ay ku salaysantahay; 1- Tigree 2- Jeebkooda. Waxayna adeegsadaan Laaluush iyo Bistoolad. Waxay adeegayaal ku leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolada, gaar ahaan Oromo, Amxaaro iyo Ogadenya. Sawirka guud waa midkaa.
Hadaan usoo noqono socdaalka Cabdi iley ee Mareykanka, siyaasiyiinta badankood waxay aaminsan yihiin in socdaalka Cabdi iley ay ka dambeeyaan Jenanadaa aan soo sheegnay. Sababtoo ah, inkastoo socdaalka 2015ka uu aad uga duwan yahay socdaaladii hore, marka laga eego dhanka himilada laga leeyahay socdaalada noocan ah, hadana laga soo bilaabo 2012kii, waxaa asaas u ahaa in lasoo diro Cabdi iley marka ay dawladda dhexe la bilowdo Wadahadal ONLF.
Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda EPRDF ayaa waxay kugu odhanayaan ONLF waxaa la gudboon in aanay waqti badan iskaka luminin xukuumadda EPRDF, oo ay wax la qabsadaan ururada mucaaradka ku ah, hadday noqoto siyaasad iyo hadday noqoto ciidanba, sababtoo ah bay ku odhaynayaan, xaaladda ay Itobiya ku sugan tahay waxay la mid tahay xaaladihii ay soo martay 1984kii iyo 1990gii. Dagaal faraha lagaga gubtay ayaanay ka fursanaynin in TPLF xukunka lagaga qaado.
Wararkan waa kuwa Adis Ababa yaala, wararka Jigjiga ayaase ka xiisa badan. Waxaa ka socda Jigjiga filimaan kuwa lagu qoslo ah (Comedy) oo si dhab ah loo jilayo. Qoraalkayga 2aad kala socda.